Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Dutch Denzel Dumfries Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Denzel Dumfries anyị bụ Biography na-agwa gị Eziokwu gbasara akụkọ nwata ya, Ndụ mbido, ndị nne na nna (Boris na Marleen), Ezinụlọ na ụmụnne (Demelza, Daniëlle na Donovan). N'ikwu nke a, nwunye ya ịbụ (Jaimy Kenswiel), ndị nne na nna, nwanne mama, ndụ, ndụ onwe onye wdg.
Na nkenke, anyị na-egosipụta Full History of a dogged Right-Back na ọdụm na-enweghị isi, bụ onye toro oke ibu ike ịkọwa - na bọọlụ Europe. Akụkọ ya na Football malitere site n'oge ọ bụ nwata ruo mgbe ọ ghọrọ ọmarịcha ụwa.
Iji mee ka agụụ autobiography gị sie ike maka ọdịdị Denzel Dumfries 'Biography, anyị agaala n'ihu ịkọwa ụlọ ngosi Early Life and Rise. Lee, na nchịkọta nke Ndụ ya.
Denzel Dumfries Biography - Lee mmalite ndụ ya na Successga nke Ọma Akụkọ.
Ee, onye ọ bụla maara na ya na kpakpando dịka; Depf Depad na Memphis, Donyell Malen na Georginio Wijnaldum so na ndị na-eme egwuregwu pụtara na nkeji otu Euro 2020. N'ihi nke a, ndị klọb dị elu nke Europe nwere mmasị na ya ma gbaa ọsọ maka mbinye aka ya.
N'agbanyeghị otuto ahụ, anyị chọpụtara - na ọ bụ naanị mmadụ ole na ole agụla akwụkwọ Denzel Dumfries 'Biography nke zuru oke. Lifebogger anabatala oku a na-akpọ iji gosi ndụ ya Akụkọ. Ugbu a na-enweghị igbu oge dị ukwuu, ka anyị bido.
Denzel Dumfries bụ nwata:
Maka ndị na - ebido Biography, ọ na - aza aha, Denz na aha zuru oke - Denzel Justus Morris Dumfries. A mụrụ ndị na-agba ọsọ Dutch na 18th ụbọchị nke Eprel 1996 na nne ya, Marleen Dumfries na nna, Boris Dumfries n'obodo Rotterdam, Netherlands.
Denzel bịara n'ụwa dị ka nwa nwoke na nwa nke abụọ nke ezinụlọ Dumfries. Ọ bụ otu n'ime ụmụaka anọ bụ; - Demelza, onwe ya, Daniëlle na Donovan - amụrụ site na njikọ dị n'etiti nne na nna ya na-ese onyinyo ebe a.
Ndị nne na nna Denzel Dumfries - Papa ya (Boris Dumfries) na Mama (Marleen Dumfries).
Maka Denzel, ụbọchị nwata bụ oge kachasị mkpa na ndụ ya - n'ihi na ọ nyere aka ịkpụzi echiche ya na ọdịnihu ya. Ọ nọrọ ọtụtụ n’ime Rhoon, bụ obodo dị na Rotterdam, Netherlands.
Denzel nwere ncheta obi ụtọ na-etolite na nwanne ya nwanyị nke okenye (Demelza), nwanne nwanyị nke obere (Daniëlle) na obere nwanne (Donovan) - onye bụ onye ikpeazụ nke ezinụlọ.
Dika papa m na mama m, o nweghi ihe kariri ichebe umuaka gi. Ma mgbe ahụ, na-ekpughere ya ụwa n'oge ha mere ya. Ọtụtụ afọ gara aga, ndị nne na nna Denzel Dumfries hụrụ na ha wepụtara oge maka foto ezinụlọ.
Foto mara mma nke nwata nke Denzel Dumfries (n'isi aka ekpe) na ụmụnne ya - Daniëlle (n'etiti aka ekpe), Demelza (n'etiti aka nri). Gini mere Donovan (n'isi aka nri) B NOTGH NOT ịmụmụ ọnụ ọchị maka igwefoto ahụ?
Persondị Childhoodmụaka nke Staunch:
Dịka nwatakịrị, Denzel nwere àgwà a dị egwu, nke mere ka ọ dị iche na ụmụnne ya. Ọ bụghị na ọ jọgburu onwe ya, mmadụ niile (gụnyere ndị ezinụlọ ya na ndị agbata obi ya) hụrụ ya n’anya. Nke bụ eziokwu bụ, Denzel naanị nwere nsogbu ịnọdụ ala n'otu ebe maka elekere.
Nwa Dutch bụ ụdị ezumike nke na-ewepụta ihe ọhụụ mgbe niile, nwanne ya nwanyị, Demelza kwuru. N'ihi enweghị obi erughị ala ya, ọ nyere Denzel aha aha nwata - Pietje Bell (mgbe usoro ihe nkiri nke ezinụlọ).
Enweghị ọdịiche dị n'etiti Denzel na nwata a - n'oge ọ bụ nwata.
IHE: Pietje Bell bu akwukwo ndi edere banyere umu nwoke banyere nwatakiri nwoke (ihe yiri ya na Denzel Dumfries) nke na - abanye onwe ya na nsogbu. Nwanne nwanyị nke okenye Denzel Dumfries, Demelza, nyere ya aha ahụ mgbe Denzel kpochapụrụ taya nke ịnyịnya ígwè ya.
N'oge ahụ, mgbe ọ na-alaghachi n'ụlọ ezinụlọ kwa mgbede (site n'ụlọ akwụkwọ), ọ na - eji bọl na ụkwụ ya mgbe niile - nna ya Boris kwuru. Ime Denzel ka ọ nọrọ n'ụlọ dịka ntaramahụhụ. Nke a bụ n'ihi na ọ dịbeghị.
O nwere ụbọchị nna ya kpọgara ya n’èzí ụlọ ha - n’etiti oge oyi ka ọ were oyi. Boris mechiri dows ruo ọtụtụ awa mana ọ nweghị ihe gbanwere. N'ezie, ọ bụ ọdịda dara ada.
Kpọrọ ya na dọkịta:
N'ihi omume na-enweghị atụ ya na omume ya, ndị nne na nna Denzel Dumfries kwetara ịkpọrọ ya gaa ụlọ ọgwụ dị nso. Ọ bụ Marleen Dumfries (Denzel's mum) bụ onye malitere echiche ahụ n'ihi na ọ na-echegbu onwe ya karịa na nwa ya nwere ike ịta ahụhụ site na ihe ọhụrụ.
Mgbe ọ nọ n'ụlọ ọgwụ, Dọkịta gere ntị na akụkọ Marleen banyere omume nwa ya nwoke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkeji iri. Na nyocha nke aka ya, nne Denzel chere na nwa ya nwoke na-ata ahụhụ Ntị enweghị nsogbu hyperactivity (ADHD).
Mgbe otu elekere zuru ezu gasịrị, Denz na mama ya si n'ụlọ ọrụ Dọkịta pụta wee banye n'ụlọ nchere iji nweta nnwale nke ule. Mgbe m gụsịrị ọdịnaya nke akwụkwọ ahụ, ma nne ma nwa nwoke lechara onwe ha anya.
Ozugbo, nne na nwa nwoke gbachiri nkịtị. Mgbe ha lere onwe ha anya ruo ihe dị ka sekọnd asaa, ha abụọ ga-agbawa - chịrị ọchị. Ihe nlere ahụ, nke Demelza mechara dọwaa;
Nke a bụ Denzel. Ọ bụ naanị ụzọ ọ dị.
Kemgbe ụbọchị ahụ, Marleen na ndị ọzọ nọ n'ezinụlọ ahụ nabatara ya - naanị otu ọ dị - na-enwe olileanya na ọ ga-agbanwe ka ọ na-etolite.
Denzel Dumfries Ezigbo Ezinụlọ:
Mazị Boris na nwunye ya, Marleen bụ ndị nne na nna na-arụsi ọrụ ike. Malite na onye isi ezinụlọ, ọ na-enwekwa ọkaibe (ugbu a ndị nlekọta) nke ụlọ ọrụ nlekọta ahụike Dutch. Denzel Dumfries Mama nwekwara ọrụ yiri ya - dịka di ya.
Denzel Dumfries sitere na ezinụlọ nwere obere ụlọ.
Ma nne na nna Denzel Dumfries rụrụ ezinụlọ dị n'etiti. Ọzọkwa, ha bụ otu ụdị ọrụ siri ike, ndị na-eji oge ha eme ihe nke ọma - mgbe ha na ụmụaka nọ n'ụlọ. N’oge ahụ, otú ọrụ ha si na-achọ oké ihe mere ka o sie ike ịnọ n’ụlọ ọtụtụ mgbe.
Nakwa ịmara, Boris na Marleen azaghị Denzel na ụmụnne ya n'ụzọ Dutch. A zụlitere ha iji mepee nabata ọdịbendị ha na ịmụtakwu banyere agbụrụ na agbụrụ ha.
Denzel Dumfries Ezinụlọ:
Nụ aha nna ya ma hụ mgbe o dechara, i nwere ike ịmalite iche na ịjụ ajụjụ banyere obodo ndị nna nna ya.
Ihe mbu, echegbula na nne na nna ochie Denzel Dumfries si Scotland - naanị n'ihi na aha nna ya 'Dumfries' bụ aha obodo dị na mba ahụ.
Eziokwu bụ, ndị ọgba bọọlụ Dutch nwere mba atọ jikọtara na mmalite ya. Otu n'ime nne na nna Denzel Dumfries (papa ya) si Aruba. Dabere na nyocha, obodo a (nke dị n'okpuru) bụ agwaetiti nke dị n'etiti-ndịda nke Oke Osimiri Caribbean.
N'aka nke ọzọ, Denzel Dumfries mum, Marleen si Paramaribo, isi obodo Suriname. Nke a bụ obere mba dị n'akụkụ ugwu ọwụwa anyanwụ nke Ebe Ndịda America. Site na nchoputa anyi, obodo nke nne na nna ya jiri Dutch dika asusu mba ha.
Maapụ a kọwara Denzel Dumfries Ezinụlọ.
Site na nne nne ya Denzel Dumfries, ọ na-ekerịta ụdị ihe yiri ya Ki-Jana Hoever, Edgar Davies, Virgil van Dijk, Mpụga Seedort, Steven Bergwijn na Patrick Kluivert.
Nleta nke nna nna (Aruba):
Kpamkpam na 2006, Denzel Dumfries Family kpebiri ịkwaga Netherlands na Aruba. Nna ya, Boris bụ onye mbụ hapụrụ - ịhazi ihe maka ọbịbịa ha. Nke a bụ foto nke Denzel Dumfries Mama na nwanne ya nwoke, Donovan n'oge ọnụnọ ha na Aruba.
Dịka nwatakịrị, Denzel nwere mmetụta nke mgbọrọgwụ ya. Nke a bụ nne ya (Marleen) n'oge nleta ezinụlọ na Aruba.
Mgbe otu afọ gasịrị, ezinụlọ Denzel Dumfries kpebiri ịlaghachi n'ụlọ ha na Rhoon, Netherlands. Obi dị ya ezigbo ụtọ maka mkpebi nne na nna ya laghachi n’obodo a mụrụ ya. Ọ bụ n'ihi otu ihe - ọ bụghị ọzọ karịa AKWBKWỌ AKW .KWỌ.
Denzel Dumfries Mmụta:
Ndị Dutch na-agba ọsọ na-aga n'ihu na-enweghị ike ịchịkwa - ọbụlagodi n'ụlọ akwụkwọ. Denzel mere ihe niile sitere na ọgba aghara n'oge klaasị gaa na-atọ ụtọ na ndị enyi na ụlọ akwụkwọ ya.
Little Denz, n'oge ụbọchị akwụkwọ ya.
N'oge ahụ, Denzel Dumfries 'Mama ga-agara ụlọ akwụkwọ ya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ izu ọ bụla iji kwado na ọ ka dị. Mgbe ụfọdụ, Marleen na-aga eleta n'ihi na ezigara Denz na klaasị.
Nwa a raara onwe ya nye n'egwuregwu football mana o nweghi ike imeziwanye nkà ya. Dika ozo, Denzel adighi nma iji gabiga ule maka ulo akwukwo kachasi elu.
Otu ụbọchị - mgbe ọ nọ n’ụlọ akwụkwọ, onye nkụzi ya gwara onye ọ bụla ka ọ kọwaa otú ha si eche ọdịnihu. N'ime ụmụaka niile, Denzel bụ naanị onye kwuru na ọ ga-achọ ịbụ ọkachamara n'ịgba ọsọ. Ozugbo o kwuru nke ahụ, klas ahụ dum chịrị ọchị.
Sean Verburg (nke dị n'okpuru ebe a) bụ otu n'ime ụmụ nwoke chịrị ya ọchị. Ebe ọ bụ na ya na Denzel gbara bọọlụ, Sean (ugbu a, ha niile etolitela) gara n'ihu ikpughe okwu Denzel;
ị bụghị na oké mgbe niile. Elere m gị anya na olulu n'otu n'otu.
Have nweghị nka na nka nka maka football.
Okwu ndị Sean Verburg na ụmụ klas ya ndị ọzọ gwara ya duru ya obi dịka - ihe mgbu dị ukwuu. Site n'oge ahụ, Denzel kwere nkwa n'ime onwe ya iji gosipụta na ha ezighi ezi.
Denzel Dumfries Football Akụkọ:
Dị ka ọdụm merụrụ ahụ, ọ malitere ịkwụsị ike ya niile na egwuregwu ahụ. Site n'itinyekwu football na ike dị elu, Denz chọtara udo nke uche.
Ogbenye Denzel kpebiri inye ihe niile ya na football mgbe ndị enyi ya chịrị ya ọchị.
Na nke ọzọ iji nwee ihe ịga nke ọma, Denzel kpebiri na ya ga-ewukwasị echiche ya nke o kwenyere na ọ ga-agbakwunye ụta egwuregwu ya.
Nwa amaala Rotterdam malitere njem bọọlụ agụmakwụkwọ ya mgbe o debanyere aha ya nke ọma Spartaan '20, otu klọb bọọlụ mpaghara - nke dị nso na ezinụlọ ya.
Denz malitere ịgba bọl na Spartaan '20.
N'ịga n'ihu ebe ahụ, ọ kwagara na ntorobịa Smitshoek nke bụ 21 min ma ọ bụ 11.6 km ruo Rotterdam. Ná mmalite, ndị mụrụ ya ga-enyere Denzel aka agụmakwụkwọ. O jiri ígwè ya mee ihe ka ọ na-eto.
Denz nọrọ na VV Smitshoek ọtụtụ oge ọ bụ nwata.
Na VV Smitshoek, ha dịịrị ndị bọọlụ ndị ọzọ nwere ezigbo mma. N'ime ha niile, Denzel bụ onye kachasị nwee nghọta. N'ezie, ọ bụ ụdị ndị mmadụ chere na ọ gaghị agabiga - rue otu mba.
Denzel Dumfries Biography - tozọ a ma ama Akụkọ:
Rick Thape bụ nwoke nyeere aka ịkpụzi ya. Onye nchịkwa ahụ ghọtara na Denzel nwere nnukwu echiche iji mee ya. Gị, ọ dịghị mma na nkà ya. O nyeere Denzel aka ịzụlite - ma dịka ezigbo ndị ịgba ọsọ ụkwụ na mmadụ.
Nke a bụ Rick Thape. Onye nchịkwa ahụ nyeere Denzel aka ịbụ ezigbo ndị ịgba ọsọ.
N'ikpeazụ, Denzel Dumfries si na ịbụ nwata nwoke ji ọrụ n'aka wee bụrụ onye dị jụụ ma lekwasị anya. N'okwu nwanne ya nwaanyị Demelza;
Ruo oge ahụ, Denz na-achọ ịmata onye ọ bụ na ihe ọ masịrị ya.
Mgbe ọ nọ na VV Smitshoek, o kpebiri na ya ga-abanye n'egwuregwu bọọlụ. Nwanne m mechara nweta udo n’ime onwe ya.
Ingzụlite Akwụsịla Echiche:
Ma mmiri ozuzo, oke ikuku ma ọ bụ oke oyi na-atụ, Denzel ga-agagharị na klọb ya. Nke mbụ na Smitshoek, emesia BVV Barendrecht, ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ka ukwuu nke o sonyere na afọ 2013.
N'ikwu okwu banyere uche ya, ndị nne na nna Denzel Dumfries nwetara okwu a. Malite na papa ya Boris;
Anyị bụ ndị ezumike na Italytali, ọ hụrụ na ezinụlọ ahụ dum laghachiri n'oge - niile n'ihi na ọ chọrọ ịga bọọlụ na Barendrecht.
Denzel Dumfries Mum, Marleen wee soro;
Agwara m ya na ụmụ nwoke Barendrecht ga-enwe ezumike. Denzel achọghị ịma banyere ya. Ọ chọrọ ịlaghachi ọzụzụ.
Ezinaụlọ Denzel Dumfries rutere n'ụlọ n'abalị na awa abụọ mgbe nke ahụ gasịrị, Denz ahụ erughị ala biliri n'ihe ndina ya gara igwe ya. Ọ dị njikere ịmalite ịkpụga ya na klọb ya tupu chi abọọ.
Ọbụna na BVV Barendrecht, ọ dịghị onye nwere echiche na Dumfries ga-eto ghọọ mba Dutch.
Nke nta nke nta, echiche ya malitere ime ka mmadụ niile gbanwee obi ha. Nke a pụtara ìhè dị ka Denzel ji mkpịsị ụkwụ gbajiri agbaji. N'ezie, o mere nke ahụ na-amụmụ ọnụ ọchị na ihu ya.
Dabere na Van Drunen onye nchịkwa ya - na Dumfries Web;
Mgbe anyị riri ibe na nri na ndị egwuregwu, ọ na-eri ihe dị mma.
Mgbe ụmụ nwoke ahụ mechara gaa oriri, Denzel ga-alaghachi.
Nwa okoro a nwere ndị dị otú ahụ a mbanye, Ọ bụ ekweghị ekwe.
Ndụ na parta Rotterdam:
Dị ka Feyenoord si Rotterdam (ebe ezinụlọ ya bi), ị ga-atụ anya na Denzel Dumfries ga-ejedebe n'oge ntorobịa ha ma ọ bụ ndị okenye. Otú ọ dị, ọ bụghị ikpe ahụ.
Ọ bụrụ na ị maghị, ọtụtụ talent bọọlụ (site na Rotterdam) nke Feyenoord anaghị ahọrọ, bụ Sparta Rotterdam na-agụkarị ya. Lọ ọrụ ahụ nwetara ya na 2014 mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ na agụmakwụkwọ football.
Nke a bụ Denzel Dumfries (nke bụ nwoke ugbu a) ya na ezinụlọ ya ka ha na-eme ememme mbinye aka nke mbụ ya na Sparta Rotterdam.
Zute ezinụlọ Denzel Dumfries ka ha na ya na-eme emume na mbinye aka nke nkwekọrịta nkwekọrịta mbụ ya.
Denzel Dumfries Bio - Akụkọ nke Ọma:
Ọdịnihu mba Dutch hụrụ mmalite mmalite ndụ na ụlọ ọhụrụ ya. N'ịbụ onye na-enwu gbaa na klọb ahụ, Denzel nyeere Sparta Rotterdam aka inweta mmeri nke Eerste Divisie. Nke a bụ onyinye enyere maka otu kachasị mma n'egwuregwu bọọlụ Dutch nke abụọ.
Maka ịbụ onye kachasị mma na ngalaba ahụ, Dumfries nwetara onyinye Golden Bull maka ịbụ onye ọkpụkpọ kacha mma na Dutch nke abụọ.
Onyinye Denzel Dumfries Golden Bull. Onye mbụ n’ime ọtụtụ ndị ga-abịa.
Nke mbụ nke onyinye dị otú ahụ bịara na 2009 mgbe SSC Napoli Legend, dries Mertens merie ya - n'oge ya na AGOVV Apeldoorn na-egwuri egwu. Promin Quincy merikwara otu onyinye ahụ n'afọ 2013.
Mgbe mmeri ahụ gasịrị, kpakpando na-arị elu chere na ọ bụ oge iji mee mkpebi kachasị mkpebi ná ndụ ya. Na nke mbụ, ọ hapụrụ ụlọ ndị mụrụ ya mgbe ọ nabatasịrị arịrịọ nyefe na SC Heerenveen, ụlọ klọọkụ kacha elu dị anya site na ụlọ.
Denzel Dumfries hapụrụ ndị enyi ya na ụmụnne ya (na nke mbụ ya) wee gaa njem 2 (189.9 km) site na Rotterdam ruo Heerenveen, obodo dị na Netherlands.
Ndụ na Heerenveen:
Mgbe anyị nọ ebe ahụ, nwa anyị nwoke nwere mmalite dị egwu ma gbanwee ọrụ ya ngwa ngwa. N'ezie, Dumfries nwetara otuto mba maka ya Cristiano Ronaldo-dị ka ima elu. Isi ihe mgbaru ọsọ buru ibu tinyere àgwà nchebe ndị ọzọ mere ka ọ nweta mmeri nke Njikọ Njikọ nke Afọ.
N'ime oge abụọ Dumfries mepụtara site na ezigbo onye na-amu amu ọkpụkpọ gaa nwoke kachasị nwee amamihe na ndị otu ndị otu Dutch. N'ịbụ onye ọ ofụ nke ezinụlọ ya, ọ nwetara oku Oranje mbụ ya Ronald Koeman gburugburu October 2018.
N'otu afọ ahụ, PSV hụrụ ọrụ ya na àgwà ya. Ihe dị ka June 2018, Dumfries bịanyere aka na nkwekọrịta afọ ise maka PSV Eindhoven. N'oge na-adịghị anya, arụmọrụ ya na omume ya rịrị elu ka ọ na-etolite ọbụna ịbụ onyeisi ndị klọb.
Ghọ onye mgbaru ọsọ na-agbachitere, onye ndu na onye isi ụgbọ mmiri. Nke a bụ ihe mere Dumfries ka ndị otu mba Dutch wee họrọ nhọrọ mbụ maka ọrụ ya.
Dịka onye ọkpụkpọ egwu nke otu mba, Dumfries ghọrọ nhọrọ izizi ziri ezi maka asọmpi ahụ. Na asọmpi ahụ, ọtụtụ ọgụ malitere ya na njedebe. N'ime ihe ngosi vidio nke ọdụm na-enweghị atụ, anyị chọpụtara na nke a bụ ọkacha mmasị anyị.
The Dutch superstar n'akụkụ ndị a ma ama EURO 2020 na-eme site na mba ndị ọzọ - ihe ndị dị ka nke Manuel Locatelli na Patrik Schick mere ka ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ nwee ekele maka nwoke ha / kpakpando nke egwuregwu ahụ.
Obi abụọ adịghị ya, anyị ndị na-agba bọọlụ na-achọ ịhụ ụzọ aka nri ọzọ na-ama jijiji na-agba ọsọ n'ubu ya na nnukwu aha dị ka Acharf Hakimi, Liverpool Trent Alexander-Arnold na Man obodo Kyle Walker.
Dumfries bụ ihe kachasị mma n'etiti kpakpando aka nri Dutch. Ọ bụ naanị otu n'ime usoro egwuregwu na - adịghị agwụ agwụ na - apụta na Oranje Holland -. Ndị ọzọ, dị ka Lifebogger si kwuo banyere Biography, bụ akụkọ ntolite ugbu a.
Denzel Dumfries Jaimy Kenswiel Lifehụnanya Ndụ:
Dị ka n'oge ọ na-eke akụkọ ndụ ya, ndị na-agba ọsọ Dutch adịghị ka ọ lụrụ. Agbanyeghị, enwere nwanyị mara mma na ndụ ya.
Jaimy Kenswiel bụ enyi nwanyị na nwunye Denzel Dumfries. Ọ, bụkwa nwa amaala Dutch nke Rotterdam - bụ nwanyị nwere onyinye na ịma mma mara mma.
Onye a bụ Jaimy Kenswiel. Denzel Dumfries Nwanyị na Nwunye ka ha bụrụ.
N'ihe banyere ihe ọ na-eme maka ndụ, Jaimy bụ onye nhazi pati na stylist. Ọ bụghị ihe ijuanya na ntutu isi ya mara mma. Nchọpụta nwere na ọ bụ onye guzobere na onye isi nke webshop Puku Puku 4000, ebe a na-ere uwe ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke.
Denzel na Jaimy amarala ibe ha kemgbe 2015. Nnụnụ ịhụnanya abụọ ahụ anọkọla ọnụ kemgbe ọ malitere ọrụ ọkachamara ya na Sparta Rotterdam. Kemgbe ahụ, ịhụnanya ha ga-esiwanye ike.
O nwere ike ịbụ nwunye ya n'ọdịnihu:
A nabatala Jaimy Kenswiel ma nwee mmekọrịta chiri anya na ndị ezinụlọ Denzel Dumfries. N'okpuru ebe a bụ ọnụahịa nke ihe akaebe foto. A hụrụ Jaimy ebe a ka ya na Demelza na Daniëlle na-enwe ọ aụ - ụmụnne nwanyị nke Denzel Dumfries.
Jaimy Kenswiel (n'etiti), Demelza Dumfries (n'aka ekpe) na Daniëlle Dumfries (n'aka nri) na-ekpori ndụ otu n'ime egwuregwu Denzel.
Thou alụbeghị di na nwunye, ma ndị hụrụ ya n'anya kpebiri otu nwa, nke batara na ndụ ha na 2020. Denzel na nwunye ya oge ụfọdụ na-ekerịta foto ha abụọ na-ele anya n'ụzọ zuru oke ma nwee obi ụtọ na ndụ ha n'akụkụ osimiri.
Jaimy Kenswiel gbanwere ndụ Denzel n'ezie. Mr Busy na-achọta oge maka obi ụtọ.
Denzel Dumfries Ndụ Nke Onwe:
Akụkụ nke Bio anyị kpughere eziokwu ndị ọzọ ị nwere ike ịmaghị gbasara Arubian Dutch. Nke mbu, anyi chọpụtara - na obuna ugbu a, Denz ka nwere ya ochie n'ime onwe ya. Ọ bụrụ na e nwere otu okwu ịkọwa ya, mgbe ahụ ọ bụ… Azụ ahịa - kwuru mama ya (Marleen).
Nke ka mkpa bụ na Denzel hụrụ ezinụlọ ya n'anya ma nwee ụdị nchedo. Dika nwatakiri na rue ugbua, ndi Arubian Dutch choro ibu nwoke nke ulo - nna ya (Boris) kwuru.
Enwere ikike doro anya na Dumfries na "eze nke ọhịa" ọnọdụ ya.
N'otu oge dị ka nwatakịrị, mgbe nne na nna ya na-anọghị ya, Denzel ga-agwa ụmụnne ya;
Hey ụmụ okorobịa, papa m na mama m anọghị, ya mere, ugbu a, abụ m nke okenye. Abụ m onyeisi ụlọ.
Ndị na-agba bọọlụ Dutch ga-ekwu nke a n'agbanyeghị na ịmara Demelza (nwanne ya nwanyị) tọrọ ya. N'oge ahụ, ụmụaka anọ ahụ ga-anata ntụziaka site n'aka ndị mụrụ ha - na mgbe mgbịrịgba ọnụ ụzọ na-ada, ọ dịghị onye a na-ekwe ka mepee ụzọ ahụ.
Denzel bụ ụdị onye na-agbasochi ihe ahụ anya. Ma, ọ ga-ewe ezigbo iwe ma ọ bụrụ na onye ọ bụla n’ime ụmụnne ya emeghee ụzọ. Nke a na-eme ọbụlagodi mgbe enyi nwanne ya nwanyị nke okenye bịara ileta.
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ndị na-agba ọsọ Dutch na-enwe mmasị na iwu. N'ime onwe ya, ọ na-eche na ọ ga-eburu ibu ọrụ maka onye ọ bụla.
N'ikwu okwu banyere ibu ọrụ, mgbe ada nwanne nwanyị nke nwanne Denzel (Neal) mụrụ, na mberede ọ bịara nwee nnukwu ụjọ - dịka ndị mụrụ ya si kwuo. N'okwu ya;
Gee nti, onye obula, abum nwanne nne. Aghaghị m ibu ọrụ ọhụrụ m. M ga-eso Neal gaa otu ụbọchị, nọọsụ ma nye ya nri.
Denzel Dumfries Web:
N'ikpe ikpe site na omume ya, Denzel bụ nwoke nwere mmụọ na-eme ihe ọkụ ọkụ, onye na-eleghara ndụ okomoko anya. Ọ nwere obere uwe ejiji na n'adịghị ka ya Neymar, ọ ka ga-abụ onye na-akwado supercars.
Dabere na foto dị n'okpuru ebe a, ọ dị ka onye na-agbachitere ọhụụ bụ ụdị na-arapara na Mercedes Benz n'ihi na e mepụtara ụgbọ ala ahụ iji nye ụdị nkasi obi ya.
Denzel Dumfries Ndụ Ezinụlọ:
Kemgbe ihe mgbaru ọsọ Euro 2020 nke rụpụtara mmeri euphoric nke ndị otu mba Dutch, ezinụlọ ndị egwuregwu bọọlụ agbaala oke na ewu ewu. N’akụkụ a, anyị ga-agwa gị gbasara ndị ezinụlọ ya na ndị ikwu ya. Ka anyị bido site na Boris.
Banyere Denzel Dumfries Nna:
Boris bụ nwoke na-eduzi ihe nlereanya. Dị ka ọtụtụ ụmụ amaala Dutch na-arụ ọrụ na klaasị, nna m na-arụsi ọrụ ike na-adọgbu onwe ya n'ọrụ abalị na ehihie iji mee ka ezinụlọ ya na-aga.
Nwa amaala Aruban bụ onye otu Board na nzukọ nlekọta mmekọrịta Dutch. N'ezie, Boris na-arụ ọrụ na ngalaba mmekọrịta mmekọrịta Netherlands maka ọtụtụ afọ. Nke a bụ foto nke Denzel Dumfries 'Papa na 2008 (mgbe ọ na-arụ ọrụ) na mgbe ọ dị obere.
Nwata Boris Dumfries.
Nna nke anọ bụ nwoke hụrụ ọdịnihu ma mara otu esi akpali ụmụ ya ịkwadebe maka ya. N'ime oge ncheta afọ iri abụọ nke Denzel, Boris na nwunye ya (Marleen) kpebiri ime ihe pụrụ iche.
Kama ịzụrụ ya ụfọdụ akpụkpọ ụkwụ egwuregwu na-ewu ewu, ha zụtara onyinye Sculpture naanị maka mkpali. Ihe kachasị mkpa bụ ime ka Denzel ghọta - na ọ ka nwere nnukwu ụzọ ọ ga-aga.
Boris bụ nna pụrụ iche nwere ụdị isi ndu pụrụ iche. Nke a bụ ihe ọkpụkpọ ya na Marleen zụtara maka Denz na ụbọchị ọmụmụ ya nke iri abụọ.
N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, onyinye ụbọchị ọmụmụ a bụ iji gbochie ya iche na ọ nọrọla mgbe ọ dị afọ 20. Ọ na-akọwa eziokwu ahụ bụ na Denzel nọ na ọkara ọkara steepụ nke ihe ịga nke ọma. N'okwu Boris;
Havekwesịrị ime ihe iji nweta ebe ọ bụla na ihe mgbaru ọsọ na-enweghị atụmatụ bụ naanị ọchịchọ.
E nyewo onyinye ihe oyiyi ebe a ma ama na ime ụlọ Denzel, ebe ọ na-atụgharị uche na ya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị ọ bụla.
Ugbu a ngwa-ngwa-afọ ise mgbe e mesịrị (mgbe ọ dị afọ 25), nke nwere Euro 2020. Obi abụọ adịghị ya, o doro anya na onyinye ụbọchị ọmụmụ 20 ya akwụsịla ngosipụta ya.
Banyere Denzel Dumfries Nne:
Denzel Dumfries Mum - Marleen, ka na-eto eto ma maa mma nke ukwuu. Biko cheta na ọ bụ nne ochie.
Marleen dị afọ iri ise na ise (dịka afọ 50), ya onwe ya dị afọ abụọ karịa di ya, Boris. Enwere ya obi ekele maka ịnọgide na-enwe ezi obi na nchekwube n'agbanyeghị nsogbu ndị chere ihu na njikwa nwa ya nwoke omume omume nwata.
Dị ka o kwesịrị ịdị, mmekọrịta dị n'etiti nne na ụmụ nwoke mbụ bụ nke chiri anya. Ya mere, dị ka Marleen si kwuo;
Abụ m onye nkwenye nke Denzel. Ọ na-agwa m ihe niile. Mmenyene ata eti itie ke ufọt nnyịn.
N'ihi ọrụ ịga nke ọma ya na nlekọta mmadụ na nke nwa ya nwoke, nne nke ụmụ anọ bụ otu n'ime ụmụ nwanyị Dutch a kacha mara amara nke Suriname.
Banyere Denzel Dumfries Uncle - John Dumfries:
Ọ bụ nwanne nwoke nke okenye nke Borris, papa m ndị na-agba ụkwụ. N'ụzọ dị ịtụnanya, Uncle Denzel Dumfries bụ ezigbo onye na-akwado PSV kemgbe afọ 1970. Amụrụ na Suriname, John si Aruba bịa Netherlands na 1966.
Ọ bụrụ na ị maghị, Denzel PSV-nwanne nna ya bụ ihe mere o ji jụ klọb ndị ọzọ wee nabata igwu maka Red na ọcha na 2018.
Site n'ọ soụ dị ukwuu, John Dumfries (n'ụbọchị nwa nwanne nna ya bịanyere aka na PSV) mere ihe ọ masịrị ya.
John Dumfries ghọrọ onye mbụ n'ezinaụlọ bịarutere na Philips Stadium iji hụ emume ahụ. Ihe njide tiketi oge PSV nọ n'ebe ahụ ọbụna tupu ọtụtụ ndị agba bọọlụ na ndị ọrụ klọb ahụ. Ọ bụ n'ezie, Tuesday nke a gọziri agọzi maka nnukwu nna nna ya.
Zute Denzel Dumfries Uncle - John Dumfries. Ọ bụ onye na-anụ ọkụ n'obi PSV.
Banyere Denzel Dumfries Cousins:
Ndị Dutch bọọlụ abụghị naanị onye ezinụlọ ya mere nke ọma na egwuregwu. Dika nyocha, umu nne ya bu; Jahfarr Wilnis na Jason Wilnis nwekwara obi ọgụ.
N'okpuru ebe a, ụmụnne abụọ ahụ abanyela kickboxing. Nke ka mkpa bụ na Jahfarr Wilnis (n'aka ekpe) na Jason Wilnis (n'aka nri) abụrụla ndị isi abụọ na-ebu oke ibu na nke dị n'etiti.
Zute Denusel Dumfries nwanne - Jahfarr Wilnis (n'isi aka ekpe) na Jason Wilnis (n'isi isi aka nri).
Diọkpara nke Wilnis, Jahfarr bụ anụ ọhịa nke otu nwoke. Ọ na-eguzo ogologo na 1.95meters ma ọ bụ 6 ụkwụ 5 sentimita asatọ ma tụọ kilogram 119. Nke a bụ vidiyo nke Dutch Surinamese kickboxer nọ n'ọrụ - ebe ọ meriri ọgụ ahụ.
Banyere 1st nke August 2020, nke ọzọ nke nwanne nwanne Denzel Dumfries - Jason Wilnis nwere ọkwa nke # 10 n'etiti ụwa - dị ka Combat Press.
Banyere Denzel Dumfries Nwanna - Donovan:
Denzel Dumfries na Donovan, nwanne ya nwoke nke obere.
Ọ bụ onye ikpeazụ a mụrụ n’ezinụlọ, ma ọ́ bụghị nwa ahụ a mụrụ n’ụlọ. Donovan bụ onye na-agba ọsọ ọkachamara na-abịa n'ihu na-agbaso nzọụkwụ nke nwanne ya nwoke bụ Denzel. Brothersmụnna nwoke abụọ ahụ bụ naanị mmadụ abụọ nọ n'ezinụlọ ya na-egwu egwuregwu.
Banyere Nwanne Denzel Dumfries - Demelza Dumfries:
Nke a bụ Demelza Dumfries, nwanne nwanyị nke okenye nke Denzel Dumfries.
Ọ dị afọ abụọ karịa Denzel. Ọzọkwa, Demelza bụ nwa mbụ na nwa nwanyị Boris na Marleen mụrụ.
Nwanne nwanyị nke Denzel gụsịrị akwụkwọ na Psychology na Mahadum Leiden, South Holland. Ọ bụ onye kwenyere na ọ dịghị ihe dị adị ma e wezụga ịhụnanya maka ezinụlọ.
Demelza Dumfries na di ya, Daiman Croïn - na-ekpori ndụ oge ụfọdụ.
N'ikwu okwu banyere ịhụnanya, Demelza na-azazi Demelza Croïn-Dumfries. Ọ lụrụ di ya nke ọma, bụ Daiman Croïn, ha abụọ nwere nwa nwanyị, Neal.
Banyere Nwanne nwanyị Denzel Dumfries - Danielle:
Zute Danielle Dumfries - nwanne nwanyị nke obere Denzel.
Ọ bụ nwa nke atọ na nwa nwanyị nke abụọ amụrụ site na njikọ dị n'etiti nne na nna ya - Boris na Marleen. Danielle dị afọ atọ karịa nwanne ya nwoke, bụ Denzel. Karịsịa, ọ bụ ọmarịcha ụmụnne ya.
Banyere ndị Denzel Dumfries:
N’ebe di anya n’obodo nna ya (Aruba), ka Joseph Dumfries di. Ọ bụ onye ọbụ abụ, onye meere onwe ya aha. Joseph Dumfries gara kọleji Mon Monis ma biri na Oranjestad, Aruba.
Zute Denzel Dumfries nwanne nna - Joseph Dumfries. Ọ bụ omenkà ama ama na Aruba.
Onye ọzọ na ndepụta nke nna nna anyị bụ Samuel Dumfries - onye ya na Nna Denzel (Boris) metụtara. Big Sam, onye a hụrụ ebe a, bụ onye echebere na nke onwe.
Samuel Dumfries bụ otu n'ime ndị ikwu Denzel.
Denzel Dumfries Eziokwu Eziokwu:
N'ịga njem site na akụkọ ndụ ya, anyị ga-eji ngalaba mmechi kpughee eziokwu ndị ọzọ gbasara mba Dutch. N’atughi nnukwu nsogbu, ka anyi bido.
Eziokwu # 1 - Honsọpụrụ Ala Nna Ya:
Ọ bụrụ na ị maghị, Denzel Dumfries na-egwuri egwu maka Aruba, mba nke papa ya. Nwaafọ Dutch ahụ kpebiri ịza òkù ha n'ihi na ọ bụghị egwuregwu mba ụwa. Nke a na-egosi ókè o jikọtara na mmalite ya.
Eziokwu # 2 - N'iji ụgwọ ụgwọ PSV ya na Citizen Nkezi:
Ebe ọ bụ na ị malitere ile Denzel Dumfries'Bio, nke a bụ ihe o nwetara na PSV.
Oge / Nrite
Denzel Dumfries PSV enwetara na Euro (€).
Kwa Afọ: € 989,520
Ọnwa kwa: € 82,460
Kwa Izu: € 19,000
Kwa .bọchị € 2,714
Kwa elekere: € 113
Nkeji nkeji: € 1.8
Sekọnd ọ bụla: € 0.03
Ebe o si bia, nwa amaala Dutch na-enweta euro 36.500 kwa afọ ga-achọ afọ 27 iji mee Denzel Dumfries PSV ụgwọ kwa afọ.
Eziokwu # 3 - Profaịlụ:
Ikpe ikpe site na njirimara ya, anyị nwere ike ịsị na Dumfries bụ ụdị ebudoro nke Serge Aurier. Ihe profaịlụ 2021 FIFA ya kwuru akụkọ abụọ. Na ọ bụ otu n'etiti ndị na - agba ọsọ ụkwụ n'ụwa kachasị nwee ume na ume.
Profaịlụ Denzel Dumfries gosipụtara àgwà ya kachasị ukwuu - Nmasị, ume na ike.
Eziokwu # 4 - Denzel Dumfries Okpukpe:
Nnyocha nwere ya na Denzel Dumfries bụ Onye Kraịst. N'adịghị ka aha dị ka Carlos Baca, Nwoke Yerry Mina na Keylor Navas, Nwa afọ Rotterdam abụghị nnukwu na mpaghara igosipụta okwukwe ya n'ihu ọha.
Tebụl dị n’okpuru na-ekpughe ozi dị nkenke banyere Denzel Dumfries.
Aha n'uju: Denzel Justus Morris Dumfries
aha otutu: Denz
Ụbọchị ọmụmụ: Bọchị 18 nke Eprel 1996
Age: 25 afọ na ọnwa 5.
Ebe amụrụ onye: Rotterdam
Nationality: Netherlands, Aruba na Suriname
Ndị nne na nna: Boris Dumfries (Nna), Marleen Dumfries (Nne)
Ụmụnne: Demelza Croïn-Dumfries (nwanne nwanyị nke okenye), Danielle Dumfries (nwanne nwanyị nke tọrọ) na Donovan Dumfries (nwanne nwoke nke obere)
Deede: John Dumfries, Joseph Dumfries na Samuel Dumfries.
Usmụ nwanne nne: Jahfarr Wilnis na Jason Wilnis
Ọrụ ụmụ nwanne nne: Ịgba ọsọ
Ezinụlọ Ezinụlọ: Aruba (akụkụ nna) na Suriname (akụkụ nne)
Ọrụ ndị nne na nna: Nlekọta mmekọrịta Dutch
elu: 1.89 mita ma ọ bụ 6 ụkwụ 2 sentimita asatọ
Onye nnọchite anya: Mino Raiola
Net net (2021): 3.5 nde euro
Ihe omuma banyere Denzel Dumfries mere ka anyi kwere n'eziokwu na odighi ihe obula di n'uwa a nke puru idochi isi ike. N'ikwu nke a, mkpebi siri ike, nkwụsi ike na B NOT talent nwere ike ịmepụta ihe ịga nke ọma maka onye na-eme egwuregwu.
N'oge ahụ dị ka nwatakịrị, Denzel nwere obere akwụkwọ ndetu nke ọ kọwara n'onwe ya otú ọ chọrọ ka ọrụ bọlbụ ya si eto. N’akwụkwọ ahụ, o dere usoro ọ ga - eme, ihe ndị o mejọrọ na otu ọ chọrọ isi meziwanye iji ruo ihe mgbaru ọsọ ya.
Otu n'ime ebumnuche ndị ahụ Denz dere na akwụkwọ ahụ bụ nnabata atụmatụ ọ ga-ewere iji ruo ndị otu mba Dutch.
Eziokwu ka a na-ekwu, Dumfries dị elu na oke ọkụ ma ọ gbasoro nke ahụ ozugbo na mkpebi siri ike. Nke a na - eme ka mmadụ dị na mbara igwe, na - egbu egbu. Ọbụna ruo ụbọchị, Denz ka na-ede n'akwụkwọ ahụ - banyere ọdịnihu ya.
O doro anya na, Akụkọ Ifo Dutch - ihe dị ka nke Dennis Bergkamp na Robin van Persie ga-enwe obi ụtọ na otu mba, nke ha hapụrụ, dị ezigbo mma.
Ọ dị mkpa Lifebogger iji nwee ekele maka nne na nna Denzel Dumfries, ụmụnne ya na ndị ezinụlọ ya maka nkwado na ntuziaka ha. Ndidi nke papa ya, Boris na mama m, Marleen na akparamagwa ya (ọkachasị n'oge ọ bụ nwata) enyerela ya aka ịgbanwe, too, ma tozuo oke.
Dịka onye bịara abịa, anyị na-asị daalụ, maka iwepụta oge iji gụọ ma gbadaa Bio anyị na Dumfries. Na Lifebogger, anyị na-eche banyere izi ezi mgbe anyị na-ewepụta akụkọ gbasara ndị egwuregwu bọọlụ Dutch.
Jiri nwayọ rute anyị (site na Kpọtụrụ anyị) ma ọ bụrụ na ị hụ ihe ọ bụla na-adịghị ele anya na isiokwu a. N'aka ozo, inwere ike ikwu okwu ka igwa anyi echiche gi banyere Denzel Dumfries na edemede a na ya.